China Isiphatho semnyango SE-Mercedes Truck Ngaphandle Kwangaphandle Kwesibambo Kwesobunxele / Kwesokudla 9017600359 9017600459 0007601359 ifektri kanye nabaphakeli | Izingxenye ze-ZODI Auto Spare
Amafutha Amanzi Sperator Bowl 20771578
Isibambo somnyango SEMercedes Truck Ngaphandle Kwangaphandle Kwesango Lesibambo Kwesobunxele / Kwesokudla 9017600359 9017600459 0007601359
Uhlobo: Isibambo Somnyango
Ukwenziwa Kwemoto: Okwe-MERCEDES-BENZ
Izibambo Zezimoto Zemoto Ikhwalithi Ephakeme Yesiprinta 901 902 903 Isiphatho Sezingcango 0007601359
Igama Izibambo Zezimoto Zemoto Ikhwalithi Ephakeme Yesiprinta 901 902 903 Isiphatho Sezingcango 0007601359
OEM Umklamo Wangempela we-OEM
Umkhiqizo Izingxenye Ezinhle
Isikhathi sokukhokha L / C, T / T, Western Union, Moneygram, PayPal
Iphakheji Ukupakisha okungathathi hlangothi
Isikhathi sokuthumela Kungakapheli izinsuku eziyi-15 ngemuva kokuqinisekisa ukukhokha
Imakethe enkulu Amazwe aseYurophu, eMpumalanga eningizimu ye-Asia, eMpumalanga-mpumalanga, e-Afrika kanti amanye aseMelika
Ukubekwa Kwezimoto: Emuva Noma Kuslayida Ngakwesobunxele Nakwesokudla
OkweMERCEDES BENZ SPRINTER ATEGO AXOR
Okwe-VW LT 1996-2006
Singumkhiqizi wobungcweti wezingxenye zezimoto, ukufaka iVolkswagen Transporter, i-Fiat Ducato, iFord Transit, iRenault Master, iBenz Sprinter, i-Iveco Daily njll.Ngaphandle kwalokho singakunikeza intengo elandelayo kanye nemikhiqizo esezingeni eliphakeme kuwe.
1. Ukukhiya Umnyango
2. Isibambo Somnyango
3. Isilinda sokukhiya
5. Isicabha Roller
6. Abanye (Xhumana nathi)
1, Ilogo kufanele ingezwe njengomklamo wekhasimende uqobo.
2, Uhla oluphelele lwezincazelo
3, Ukulawulwa kwekhwalithi eqinile
4, Luhlala isikhathi eside ekusebenziseni nasekuncikeni kokusebenza
5, Ulwazi Lwezobuchwepheshe Olunguchwepheshe;
6. Abasebenzi Bezinsizakalo Abacabangelayo;
7. I-Systerm and Cooperations yabakhiqizi abahle;
8, Uhlelo Oluqinile Lokulawulwa Kwama-oda;
9, Indawo Yokugcina Izindlu Efanele futhi Ephephile.
Ukupakisha kahle futhi ngobunono, ngokuya ngempahla yamakhasimende
11.Provider izeluleko professional kumakhasimende ezimakethe ezahlukene
Uchungechunge Ingxenye Igama lengxenye ezenzakalelayo Ikhwalithi yeBanga
Ingxenye Yenjini Spark Plug, cylinder kit, head cylinder, cylinder, carburetor, piston set, piston ring set, oil pump, push rod, valve set, rocker arm, cam follower, cam follower with shaft, center clutch, outer clutch, cam shaft, gear speedo, njll. I-OEM, i-A
Izingxenye Zokuhambisa Ishaft kick kick, shaft crank, izindlu assy, ​​induku yokuxhuma ikhithi, istocket set, clutch assy, ​​clutch disc, Clutch pressure plate, chain njll I-OEM, i-A
Izingxenye Zamasondo Ihabhu engemuva, i-cap ngemuva, ihabhu ngaphambili, ihabhu langaphambili, ishubhu, ibhuleki lediski langaphambili, ibhuleki lebhuleki, isicathulo sebhuleki, irimu, ihabhu langemuva lenjoloba, isigubhu sekhola, isiteringi sokugijima, sakhuluma, ibhawodi lesisekelo ngemuva, i-asi, i-hydraulic brake master cylinder njll. I-OEM, i-A
Izingxenye Zekhebula Ikhebula lempintsha, ikhebula le-clutch, ibhuleki langaphambili, ikhebula lemitha, ikhebula lokushintshela ngaphambili, inkinobho yesivinini, ulayini webhethri, izintambo zokubopha izintambo, shintsha ukubopha ngemuva, ikhebuli yejubane njll. I-OEM, i-A
Izitho Zomzimba Isiduli sangemuva sokushaqeka, isiqu se-stem head head, igiya lokushintsha igiya, isiqu se-stem, i-brake rod, i-brake pedal, i-exhaust muffler, i-foot rest rubber, i-carrier, i-side stand, ukushaqeka ngaphambili, ukuma kwesikhungo, isihlalo, ithangi likaphethiloli, ibha yokubamba, ngaphambili unogada wodaka, induku yokuqala yokunyathela, ukukhahlela ukukhahlela, ingalo yemfoloko yangemuva, ukukhanya kwebakaki, isethi ye-lever, ikhoyili yokushisa njll. I-OEM, i-A
Izingxenye zikagesi Isethi yokushintshwa kwe-Clutch / brake, ibhethri, i-fly-wheel assy, ​​i-clutch / i-brake lever & switch assy, ​​i-starter relay, uphondo, i-flasher, i-stator self assy, ​​isibambo sokukhiya, ukhiye wephethiloli, i-stator assy, ​​i-starter coil / ikhoyili elula, C, D, I , i-rectifier, switch switch, cap tank tank njll. I-OEM, i-A
Izingxenye zepulasitiki Isiphathi se-Bulb, imitha assy, ​​isibuko, ukukhanya kwekhanda, ikhava kaphethiloli, isethi yesivikelo se-lever, ukukhanya kwendlu yendlu, i-fender yangaphambili, ukukhanya komsila welensi, i-fender yangemuva, ikhava yeketanga, ukukhanya kwekhanda, ukukhanya komsila, ukukhanya kwe-winker, ikhava eseceleni njll. . I-OEM, i-A
Uchungechunge lwe-Gasket I-oyili seal kit, gasket cylinder, gasket qeda, gasket kit egcwele, isethi yenjoloba yokubamba, ilunga le-carburetor njll. I-OEM, i-A
Izesekeli Umsila webhokisi, izigqoko zokuzivikela, isitikha, ikepisi, izingubo, amagilavu, isiphathi sopende, i-alamu-mp3, i-alamu mp3-2, i-alamu, ithangi likaphethiloli, inyawo elingemuva elinonyawo ngombala, inyawo elingemuva elinonyawo ngombala, i-grip rubbe nge umbala, i-tire sealant, i-grip rubber enombala njll.
Ikhwalithi Nensizakalo Kwa-ZODI, ukubeka phambili kwethu # 1 bekuhlala kunikeza amaklayenti ethu imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nensizakalo yamakhasimende ephezulu.
Isikhathi Esisheshayo Sokuhola Sizibophezele ekunikezeni isikhathi esisheshayo sokwenza izinto futhi sisebenze kanzima kakhulu ukuqinisekisa ukuthi zonke izikhathi zakho ezibekiwe ziyahlangatshezwa.
Amanani angenakuhlulwa Siqhubeka silwela ukuthola izindlela zokwehlisa izindleko zethu zokukhiqiza, futhi sidlulisele imali esiyongile!
Ukuqwashiswa Komkhiqizo Umgomo wanoma imuphi umkhiqizo oqinile ukufinyelela ezingeni lokuqwashisa okufaka umqondo wekhwalithi nokubaluleka kuwo wonke amakhasimende akho angaba khona.
Ukwabelana Ngezinsizakusebenza ezikhethekile-Singakha ikhathalogu ngokuya ngesicelo samakhasimende sokukusiza ukuthi uthuthukise izimakethe ezintsha;
Imininingwane Ye-oda Ejwayelekile
Siyaziqhenya ngomsebenzi wethu nangezinhlobonhlobo zemikhiqizo esiyinikezayo. Sinolwazi ekusebenziseni iMiddle East, i-Afrika, imakethe yase-US, imakethe yaseYurophu nemakethe yase-Afrika, imakethe yaseningizimu Melika.
Sicela wazi ukuthi izikhathi zethu zokuhola ezikhiqizwayo zincike ezintweni ezithile nakubuningi bezinto. Impumelelo yethu isuselwe ekuqondeni kwethu izidingo kanye nohlobo lwezikhathi zokugcina zokukhangisa nokumaketha.
Kungakho sihlala siqinisekisa ukuthi yonke i-oda lilethwa ngesikhathi.
Bheka ngezansi ukuthola eminye imininingwane ngokufaka i-oda
2. Qinisekisa intengo, isikhathi sokuhola, imfuneko yokupakisha, isikhathi sokukhokha njll.
3. Abathengisi be-ZODI bathumela i-Invoice yeProforma enophawu lwe-ZODI.
4. Ikhasimende likhokha idiphozi bese lisithumela irisidi yeBhange.
5. Sizokwazisa iklayenti ukuthi siyitholile inkokhelo, sihlele ukukhiqizwa futhi sazise isikhathi esilinganisiwe.
6.Qeda izithombe zomkhiqizo wokukhiqiza omkhulu ukuze zivunyelwe. Ungahlela futhi Ukuhlolwa komuntu wesithathu.
7. Amaklayenti akhokha ibhalansi futhi i-BEE Ithumela izimpahla .Futhi zingamukela isikhathi sokukhokha-Ibhalansi ngokuqhathanisa ne-B / L Kopisha noma i-L / C Ithemu lokukhokha. Yazisa inombolo yokulandelela bese uhlola isimo samakhasimende.
8. I-oda lingasho ukuthi "qeda" lapho uthola izimpahla futhi wanelise ngazo.
9. Impendulo ku-BEE mayelana nekhwalithi, isevisi, impendulo yezimakethe nokusikisela. Futhi singenza kangcono.
Q: Yiziphi izingxenye auto ingabe unikeze?
A: Ingxenye yokuphepha ye-injini, izingxenye ze-Automobile chassis, izingxenye ezimisiwe zezimoto, uhlelo lokudlulisa imoto, izihlungi zezimoto, izingxenye zebhuleki nezinye izinhlobo zezingxenye zokuzenzakalelayo ze-Auto.
Q: Ingabe imikhiqizo yakho isetshenziswa umhlaba wonke?
A: Yebo, sinikeza iMid-mpumalanga, i-Afrika, iNingizimu Melika, i-Asia eseningizimu, i-Ukraine, i-Italy, i-Australia kanye nokunye, izingxenye eziningi zenjini zisetshenziswa endaweni yonke ekusetshenzisweni.
A: T / T 30% njengoba idiphozi, futhi 70% ngaphambi kokubeletha.
A: Ngokuvamile, kuzothatha izinsuku ezi-3 ukuya kwezingu-10 zomsebenzi ngemuva kokuthola inkokhelo yakho kusengaphambili. Isikhathi esithile sokulethwa sincike ezintweni nobuningi be-oda lakho.
Q: Ungakwazi yini ukukhiqiza ngokuvumelana namasampuli?
Q: Ingabe ukuhlola zonke izimpahla zakho ngaphambi kokubeletha?
Q: Wenza kanjani ibhizinisi lethu ubuhlobo besikhathi eside nobuhle?
A: 1. Sigcina ikhwalithi enhle nentengo yokuncintisana ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende ethu ayazuza.
2. Sihlonipha wonke amakhasimende njengomngani wethu futhi senza ibhizinisi ngobuqotho futhi senza ubungani nawo, noma ngabe avelaphi.
Langaphambilini I-Truck Belt Tensioner Pulley ye-Mercedes-Benz OEM 0005500833 0005501633
Olandelayo: Ikhwalithi Ephakeme Yekhwalithi Ephakeme ye-MB CABINA641 6418200861 LH 6418200961 RH 3818203961 LH 3818204061 RH
Inkungu Lamp ye-BENZ ACTROS MP2 L: 9438200056 noma i-R: ...
Plastic engemuva Mudguard Oem 9435200020 ngoba MB Act ...
ethengisa esishisayo amaloli European esindayo auto spare pa ...
Factory Isitolo esidayisa yonke impahla Ukuze Benz Brake Drum OEM 62442 ...
OEM 9608103516 LH iloli ohlangothini isibuko ngoba Mercede ...
I-Cast Iron Truck Front Brake Drum 6584210001 ye-MB